पण्डितको छोरो भएर भैँसीको मम खाने! :: माधव फुँयाल :: Setopati
पण्डितको छोरो भएर भैँसीको मम खाने!
'पिच बाटा नि नगुड्नेगरी मान्छे कोच्नु पर्ने असत्तिलाई' यस्तै प्रकारका गाली कहिले यो कुनामा त कहिले त्यो कुनामा प्रतिध्वनित भैरहे। न ड्राइभरले सुन्यो न खलासीले नै।
'ओ दिदी, अलि पर सर्नु न, अरूलाई पनि जानु पर्छ...' भन्दै यात्री चढाउँनै तल्लीन रहे निरन्तर। अन्ततः संघर्षले शिखर चुम्यो। कालोपत्रे नागबेले सडकमा लामो पौठाजोरी गर्दै बस पहाडको शिखरमा आइपुग्यो। केहि नयाँ यात्री थपिए। केही नयाँ गाली बर्सिए।
'कति कुम्भकर्ण जस्तो सुतेको, उठ् बनेपा आउनै लाग्यो' मैले उस्लाई झकझकाउँदै बोलाएँ।
ऊ आँखा मिच्दै उठ्यो, यसो वरपर हेऱ्यो 'ह्या, अझैं बाँकी छ बनेपा आउन। किन उठाको होला यस्ले।' ऊ फेरि सुत्यो।
मैले सोधें 'खै कहाँ छ त मम पसल?'
'पख न, हेर्दै छु। सुमनले त चोकमै छ भन्थ्यो।'
'कसैलाई सोधौ न त, भोक लागिसक्यो यार।'
मैले खल्तिबाट एउटा चुइङगम निकालेर उसलाई दिँदै भनेँ, 'ला मेन्टोस खा, यसले दिमागको बत्ती बाल्छ बुझिस्।'
हामी नजीकै एकजना अधबैँसे मानिस सडक पेटीमा लत्ताकपडा बेच्दै थिए। मैले सोधेँ 'दाइ, मम पसल कता छ?'
'मम पसल त बसपार्कमा छ।'
हामीले सोध्यौँ, 'बसपार्क कता छ?''
उनले इशाराले देखाउँदै भने 'ऊ त्यो पानी ट्यांकीको आडैमा छ।'
रबिले पत्याएन। वरिपरि हेऱ्यो अनि पुनः सोध्यो 'त्यति टाढा छ र दाइ? मेरो साथीले त चोकैमा छ भन्थ्यो।'
'उसो भए तिम्रै साथीलाई सोध भाइ। मलाई फुर्सद छैन। आफै खोज्नु नि। कहाँ कहाँबाट आइपुग्छ्न बुनी खराब गर्न' फतफताउँदै उनी आफ्नो सामानको विज्ञापनमा लागे।
'ल बर्बाद, बस त छुट्यो कि क हो? बसपार्क त खाली छ त यार' मैले आशंका पोखेँ।
तुरून्तै हामी हानिएर बसको काउन्टरमा पुग्यौँ र एकै सासमा सोध्यौँ 'दाइ, तीन बजे काठमाडौँ जाने बस गैसक्यो?'
'छैन भाइ, तीन बजेको बस ढिला भयो। अब चार बजेमात्र आउँछ।'
'जात फालिस् त पण्डित भैँसीको झोलमा' भन्दै हाँस्यौँ हामी।
'हाम्रो त जात गयो नि बाहुन। कसैले थाहा पायो भने त गाली पो खानु पर्छ त' मैले भनेँ।
'गाली मात्र हैन, पिटाइ नै खाइन्छ' उसले प्रष्ट पाऱ्यो।
समाजका अरू वर्गले निर्वाद खाइरहँदा हामीलाई बन्देज गर्ने सोच नै टिठलाग्दो, विभेदकारी लाग्थ्यो हामीलाई। खाना पकाउँदै गर्दा मैले आमालाई सुनाएँ 'आमा, हामीले स्कुलमा विज्ञानमा पढेको सधैँ एकै प्रकारको खानेकुरा खानु हुँदैन। सधैँ एकै प्रकारको खानेकुरा खाँदा पेट ठूलो हुने रोग लाग्ने हुन्छ। बेलाबेलामा अन्डा, कुखुराको मासु पनि खानु पर्छ।'
मेरो कुरा नसकिँदै आमाको जवाफ आयो 'बाहुनको छोरो भएर अन्डा सन्डा खानु हुँदैन। जात जान्छ।'
'आमा, विज्ञान भनेको डाक्टर हो, डाक्टले भनेको सुन्नु पर्छ।'
'खै म केही जान्दिनँ, तेरो बालाई सोध्। बाउले खानदिए खा' भनेर आमा पन्छिइन्।
एकदिन हामी स्कुलबाट फर्कँदै गर्दा रबिले सोध्यो 'माने, तैंले बफ मम खाएको छस्?'
'मैले पनि खाएको छैन, कतै टाढा गएर खाएर आँउ।'
'बनेपा गए कसैले पनि चिन्दैनन्। अनि त्याहाँ नयाँ मम पसल खोलेको छ रे। हामीसँग दशैँको पैसा पनि छ। सुमन र उस्को दाइ गएर मम खाएर आएको रे अस्ति। त्यही भएर स्कुल नआएको रहेछ। हामी पनि जाउँ।'
मैले हौसिँदै सोधेँ 'कहिले जाने त?'
'पर्सी तीन तीन वटा कक्षा खाली छ, पढाइलाई नि असर नगर्ने, मम पनि खाइने। के भन्छस?'
मैले पनि 'हुन्छ' भनिदिएँ। र आज हामी यहाँ छौँ, चौरमा बसेर घाम ताप्दै बनेपा बजारको बसपर्कमा।
'बसले ढिला गऱ्यो, चिसो पनि भयो हिँड् चिया खाउँ' मैले हाम्रो मौनता भंग गरेँ। मैले ज्याकेट लगाएँ अनि उसको हात तानेर उसलाई पनि उठाएँ। उसले निकै भारी स्वरमा प्रश्न गऱ्यो 'माने, बस आएन भने क गर्ने यार?'
हाम्रो गोपनियता भंग गर्न उद्धत यो पापी समय। तर मैले ओठे जवाफ दिएँ 'ह्या नडरा आउँछ, हिँड् चिया खाउँ अनि बुझौँ बस किन नआएको रहेछ।'
सँगैको बसपार्क मलामी फर्केपछिको मसानघाटजस्तै सुनसान थियो। हामी यतिकै टोलाएर बसेको देखेर चियापसले साहुजीले सोधे 'ए भाइहरू, रात परिसक्यो तिमीहरूलाई घर जानु पर्दैन?' साहुजीको प्रश्न अनपेक्षित थियो।
'यिनीहरूलाई मैले बिहानदेखि नै बजार वरिपरि देख्या थिएँ।
अर्को प्रश्न 'घर कहाँ हो भाइ तिमीहरूको?'
'सर हामी काठमाडौँबाट आएका हौँ। तीन बजेदेखि बस कुर्दा कुर्दा आएन' यति भनिसक्दा मेरो गला अवरूद्ध भई आँसु गालाबाट ओरालो लागिसकेछन्। रबि पनि सुँक्क-सुँक्क गर्न थालिसकेको थियो।
'काठमाडौँमा कहाँ हो घर?'
'कपन' यसपाली रबिले जवाफ दियो।
'स्कुलबाट भागेर आएका त होलाउ? कपन कुन स्कुलमा पढ्छौ नि?'
यसपालि पनि रबिले जवाफ दियो 'जेम्स स्कुल।'
'आज बस आउँदैन। साँगादेखि जगातीसम्म कर्फ्यू लागेको छ।'
उनले पढ्दै गरेको सन्ध्याकालीन पत्रिकाको हेडलाइन थियो 'सडक दुर्घटनामा स्थानीय युवाको मृत्युपछि साँगादेखि जगातीसम्म कर्फ्यू।'
पत्रिकाको हेडलाइन देखाउँदै उनले सोधे 'कहाँ बास बस्छौ त? राति त यहाँ स्याल आउँछ।'
'नडराऊ म तिमीहरूको मुकेश सरलाई चिन्दछु। म उनलाई खबर गरिदिन्छु कि तिमीहरू यहाँ छौ भनेर। उनले तिमीहरूको परिवारलाई खबर गरिदिन्छन्।'
'तिमीहरू भित्र सुत, म बाहिर सुत्छु। अनि तिमीहरूको परिवारलाई खबर पनि गर्छु।'
उहाँ भन्नु हुन्थ्यो 'साझेदारीमा गरिएका काम सफल अनि असफल हुनुमा सबै साझेदारको बराबर योगदान हुन्छ। कुनै कार्य सफल हुँदा जस जति आफू लिने अनि असफल हुँदा अपजस जति अर्काको थाप्लोमा हाल्ने नगर्नु। यस्तो कार्यले मानिसलाई स्वार्थी बनाउँछ।
तँ सधैँ स्वार्थी मानिसहरूको घेराबन्दीमा हुन्छस्। स्वार्थी मानिसहरू सधैँ प्रेमको भोका हुन्छन्। प्रेमको भोको मानिस कहिल्यै खुसी र सन्तोष हुँदैन। तँ त्यस्तो कहिल्यै नभएस्।'
'स्वाँठहरूलाई घरको घ्यु र भात नपचेको। गल्लाले लगेर भाँडा मजाउँथ्यो अनि थाहाँ पाउँथे। बाबुले नभेटेको भए यी स्वाँठहरूलाई कि बाघले लैजानिरहेछ कि गल्लाले लगेर बेच्नी रहेछ।'
तन्द्रामै सोधेँ, 'हामी कहाँ आयौ?'
'स्कुलमा' उसले छोटो उत्तर दियो।
'सिधा बस्' गोविन्द सरको आदेश आयो।
आँखा रसाए मेरा। मैले हजुरआमालाई सम्झेँ। अहिले हजुरआमा यहाँ भैदिएको भए सबैलाई गाली गरेर 'हराएर आएका नातीहरूलाई सम्झाएर बुझाएर अबदेखि नगर भन्नु त कता कता सबै मिलेर हाप्काउँदा रहेछन्। तिमीहरूले आफूले गरेका उटुङ्ग्या कामहरू बिर्सियौ' भन्दै पक्कै लिएर जाँनु हुन्थ्यो।
गोविन्द सरले कन्सिरीका रौ तानेपछि पो झल्याँस भएँ। उनको प्रश्न मैले सुनिनँ। उनले प्रश्न दोहोराए 'कहिले कहिले भागियो?'
केही बेर मौन रह्यौँ। निउरीमुन्टीमै कर्के आँखाले रबिलाई हेरेँ। उसका आँखाबाट तप तप आँसु झरिरहेको देखेँ। अनि काँपेको स्वरमा जवाफ दिएँ 'पहिलो पटक हो सर। हामी भागेको होइन। फर्किन बस नै आएन कर्फ्यू लागेर।'
अर्को प्रश्न मुकेश सरको थियो। 'बनेपा सवारी केको लागि?'
पण्डित बा कड्किए 'कान सुनिनस् कि के हो? सरलाई जवाफ दे।'
रबिले फ्याट्ट भन्यो 'बफ मम खान गएको।'
'थुइक्क स्वाँठ, पण्डितको छोरो भएर भैँसीको मम खाने!'
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १०, २०७७, ०१:४५:१५